पुन: ट्रेन्डीङमा अनमोल ! « THE CINEMA TIMES
पुन: ट्रेन्डीङमा अनमोल !
द सिनेमा टाइम्स, काठमाडौँ – अभिनेता अनमोल केसी नेपाली सिनेमा क्षेत्रका ट्रेन्डीङ वादशाह नै हुन् । उनिसँग सम्वन्धित कुनै पनि नयाँ सामाग्री सबैको रोजाईमा पर्छन ।
ट्रेलर, ‘यति यति पानी’, ‘जानी नजानी माया’ र मिडियामा प्रकाशित अन्तर्वार्ताले ट्रेन्डीङको उचाई मापन गरिसके पछी हलहरुमा ‘कृ’ले ट्रेन्ड जमायो । उक्त साता बलिउड र हलिउड भन्दा पनि माथि ‘कृ’ नै रह्यो । यहिँ कुराले पनि अनमोलको स्टारडम कतिसम्मको छ भनेर प्रमाणित गर्छ ।
‘कृ’ रिलिज भएको एक साता पछी युट्युबमा सिनेमाको एक गीत सार्वजनिक गरियो । ‘उकालीमा पछी पछी…’ बोलको गीतले यतिबेला युट्युबमा शिर्ष स्थान कायम गरिरहेको छ । दुई दिन अगाडी रिलिज भएको गीतलाई दर्शकले अत्याधिक रुचाएका छन् । विशेष गरि सिनेमाको सिनेम्याटोग्राफी र अनमोल/अदिति बुढाथोकीको केमेस्ट्रीलाई रुचाईएको छ । यो समाचार तयार पार्दासम्म यो गीतलाई करिब ७ लाख पटक हेरिएको छ ।
अल्मोडा राना उप्रेतीको शब्द/संगीत/स्वर र एरेन्ज रहेको गीतमा बिक्रम लामा र एन्जेला खत्रीले कोरियोग्राफी भरेका छन् ।
भुवन केसी र सुवास गिरीले ३ करोड ५० लाख बजेटमा निर्माण गरेको सिनेमाले पहिलो सातानै लगानी रिकभर गरिसकेको छ । दोस्रो सातादेखिको व्यापार निर्मातालाई नाफाको रुपमा हुनेछ । दोस्रो सातामा पनि ‘कृ’ले राम्रै हल र सोज पाईरहेको छ ।
सुरेन्द्र पौडेल निर्देशित सिनेमामा अनमोल र अदितिका अलावा अनुपबिक्रम शाही, कामेश्वर चौरसिया, सरोज खनाल, लक्ष्मी गिरी, रुपा राना लगायतका कलाकारको मुख्य भूमिका छ ।
‘कृ’मा चन्द्र पन्तको एक्सन, अल्मोडा राना उप्रेती र विशेष पाण्डेको संगीत, पुरुषोत्तम प्रधानको छायांकन, प्रदिप भारद्धाज र आशिष रेग्मीको पटकथा तथा संवाद रहेको छ ।